2 sarkaal ayaa dhintay ka dib markii ay al-Shabaab Garbaharey weerartay - Sabahionline.com
Maarso 02, 2012
Dagaalyahaniinta al-Shabaab ayaa weerar ku soo qaaday magaalada koofur-galbeed Soomaaliya ku taalla ee Garbaharey habeen hore (Khamiistii 1-da March) iyagoo halkaa ku diley labo sarkaal oo sarsare kuna dhaawacay dhawr kale BBC-da ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
Maamulka Dooxada Shabeelle oo soo bandhigay maydad al-Shabaab Isku dhacyo ay ku dhinteen 5 al-shabaab ah Al-Shabaab ayaa isticmaalayey hub culus oo ay hoobiyeyaal ku jiraan iyo gawaarida gaashaaman iyagoo isku dayayey in ay magaaladan muhiimka ah oo ay sanad ka hor iyagu haysteen dib u qabsadaan. Garbaharey ayaa hadda waxay ciidamada DFKMG ah ee Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya u isticmaalaan saldhig ay ka weeraraan al-Shabaab. Dagaalku wuxuu gaaray subixii Jimacada ahaa, laakiin ciidanka Soomaaliya ayaa magaalada u haray. “Garbaharey waxay ku jirtaa gacanteenna,” ayuu yiri xildhibaan gobolka ka soo jeeda oo la yiraahdo Maxamuud Sayid Aadan. “Laba nin ayaa dagaalka inooga geeriyootay, kuwa dhaawacmayna halis maahan dhaawacoodu,” ayuu yiri. Shan ciidanka al-Shabaab ah ayaa dagaalka lagu diley ayuu yiri Jamaal Xasan Sarey oo ah taliyaga ciidamaga DFKMG ah ee jooga Garbaharrey, sida uu sheegay Radio Bar-Kulan oo Soomaaliya ku yaal. Ma jeclaysatay maqaalkan?